Saddex Maalin Ka Hor Furitaanka Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartooyda,Wax Ka Ogow Jadwalka Suuqa Iyo Xiddigaha Furaha U Ah Xagaaga | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Saddex Maalin Ka Hor Furitaanka Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartooyda,Wax Ka Ogow Jadwalka Suuqa Iyo Xiddigaha Furaha U Ah Xagaaga
Saddex Maalin Ka Hor Furitaanka Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartooyda,Wax Ka Ogow Jadwalka Suuqa Iyo Xiddigaha Furaha U Ah Xagaaga
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 28-06-16 6:11 AM Waxaa Si weyn aan u sugaynaa suuqa kala Iibsiga ciyaartooyda oo furmaya bisha July 1, iyadoo kooxaha waweyn rikooro dhanka lacagta ah laga yaabo in ay sameeeyaan.
Manchester United ayaa rabta Julian Draxler iyo Paul Pogba, halka Barcelona ayaa rajeyneyso saxiixa daafaca Samuel Umtiti horaanta July.
Shabakadda ciyaaraha Laacibiin.com, ayaa maanta idin soo gudbineysa 10-ka saxiix ee laga yaabo in ay si dhaqso ah ku dhacaaan marka suuqa uu furmo.
1-Julian Draxler- Wolfsburg, Waxaaa laga yabaa inuu ku biiro kooxda Manchester United ,ciyaaryahanka qadka dhexe ee Germany Draxler ayaa lagu qiimeeyaa £ 30m.
2-Michy Batshuayi- Marseille, waxaa xiiso uqabta Crystal Palace oo ka dhisan koonfurta London € 38 milyan aya lagu qiimeeyaa weeraryahanka Belgium.
3-Paul Pogba- Juventus, waxaa uu bartilmaameed u yahay Manchester United, lacag rikoor ah ayaa looga heli karaa suuqa kala iibsiga xiddiga khadka dhexe.
4-Samuel Umtiti- Lyon, waxaaa uu ku dhaw yahay kooxda Barcelona,saxiixa daafaca boosaska badan ee Faransiis ayaa muhiimad ay u arkaan Bulgrana.
5-Gabriel Barbosa- Santos, waxaa lagu waramayaaa inuu u dhaqaaqi doono kooxda Arsenal ,Arsene Wenger ayaa dalab ka gudbiyay weeraryahanka da’da yar ee reer Brazil Gabriel,
6-Radja Nainggolan- Roma, kooxda Chelsea ayaa dooneysa in ay u dhaqqaajiso Stamford Bridge , ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Belgium ayaa laga soo diiday dalab £ 30m hore Bules, laakiin weli wada xaajoodka waa socdaa.
7-Ferhat Cogalan- Valencia, waxa uu ku biiri karaa kooxda Manchester United oo xiiseyneysa , waa 14-sano jir Cogalan, kana tirsan Da’yaarta Valencia, iyadoo Arsenal, Juventus iyo Borussia Dortmund sidookale isha ku hayaan.
8-Axel Witsel- Zenit St Petersburg, waxaaa uu ku biiri doonaa kooxaha Chelsea Chelsea ama Everton midkood ciyaaryahanka khadka dhexe ee Belgium.
9-Alvaro Morata- Real Madrid, weeraryahanka ayaa isha waxaa ku heysa Chelsea ,halka Arsenal iyo Man United rajo ka leyihiin.
10-Dwight Gayle- Crystal Palace, Fulham ayaaa u wareegi karaa haddii uu ka dhaqaaqo garoonka Selhurst Park weeraryahankaaan,